“Waan kuu baahanahay laakiin…” – Unai Emery oo ka jawaabay hadalkii uu sheegay Ozil – Gool FM
“Waan kuu baahanahay laakiin…” – Unai Emery oo ka jawaabay hadalkii uu sheegay Ozil
(Arsenal) 17 Okt 2019. Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa sheegay inuu u baahan yahay adeega xiddiga reer Germany ee Mesut Özil, isagoo xaqiijiyay in laacibka reer Germany uu si fiican kaga qeyb qaadanayo tababarka Gunners.
31 jirka reer Germany ayaa ku jira xaalad adag, kaddib markii uu qorshihiisa kooxda ka saaray macalinka reer Spain ee Unai Emery.
Saxaafada Ingariiska ayaa cadeysay in macalinka reer Spain ee Unai Emery uu doonayo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan kaga takhaluso xiddiga reer Germany ee Mesut Özil.
Haddaba xiddiga reer Germany iyo kooxda Arsenal ee Mesut Özil ayaa dhawaan xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu ka qeyb qaato kulamada soo socda ay ciyaareyso naadigiisa Gunners.
Yeelkadeeda, tababare Unai Emery ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Arsenal iyo Sheffield United horyaalka Premier League isniinta soo aadan wuxuu ku sheegay:
“Xilli ciyaareedkan si adag ayuu kaga bilaawday Mesut Özil”.
“Si adag ayuu u sheeqay inta lagu gudi jiray kulamadii saaxiibtinimo ee diyaar garowga xilli ciyaareedka kahor, laakiin dhibaatada ay wajaheen isaga iyo Sead Kolašinac ayaa ah inaan xoogaa joojiyay”.
“Kaddib waxa uu seegay tababarka muddo hal isbuuc ah, sababa la xiriira dhaawac, wuxuuna awoodi waayay inuu taam u noqdo kulamada, laakiin labadii isbuuc ee la soo dhaafay si fiican ayuu uga qeyb qaatay tababarka”.
“Albaabka kama xeranin Ozil, si uu markale ugu soo laabto ka qeyb qaadashada kooxda, maxaayeelay marka hore waxaan doonayay inuu noqdo mid aad u wanaagsan jir ahaan iyo maskax ahaan, si uu markale u ciyaaro”.
“Haddii uu Ozil si fiican kaga qeyb qaato tababarka maalin walba, shaki la’aan wuu ciyaari doonaa, sababtoo ah waxaan u baahanahay ciyaaryahan kasta oo kooxda ka mid ah, marka laga reebo inuu yahay ciyaaryahan weyn, wuxuuna naga caawin doonaa wax badan”.
Valverde oo daaha ka qaaday aragtidiisa ku aadan dib u dhigista kulanka El Clasico